How'd it happen and more reports?: CPF ဆိုတာဘာလဲ ?
ကိုအေးငြိမ်း ဘလော့မှာကူးယူထားတာပါ... စကာင်္ပူမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေအားလုံး သိထားသင့်တဲ့ထင်လို့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေပါဘဲ....
ဤတွင်ရေးသားထားသမျှ အချက်အလက်အားလုံးမှာ စင်ကာပူအစိုးရ website ဖြစ်သော http://cpf.gov.sg/ နှင့် Wikipedia website,http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Provident_Fund မှ ဖြစ်ပါသည်။
သို့အတွက် အသုံးမလိုလျှင် အတိုးများများရရန် OA မှ SA သို့ပြောင်းထည့်ပါဆို၏။ သို့သော် သူက တစ်လမ်းသွားဖြစ်သည်။ SA ထဲရောက်သွားသော ပိုက်ဆံကိုOA ထဲ ပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ပါလေ။ ထို့ကြောင့် OA ထဲတွင် မလိုတော့တာ သေချာမှ SA ထဲပြောင်းသင့်ပါသည်။
၇။ CPF အားလုံးထုတ်ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်နေပြီးခါမှ စင်ကာပူသို့တစ်ဖန်ပြန်လာကာ PR ထပ်လျှောက်လိုလျှင် ယခင်ထုတ်ယူ သွားသော CPFပိုက်ဆံအားလုံးပြန်သွင်းရန်လိုပါသည်။ ဤသို့သွင်းပြီးမှ Letter of Clearance ကို ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဤစာကို PR လျှောက်ရန် ICA သို့ ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
EP, S Pass, WP များ၊ စီးပွားရေးလုပ်နေသော Self-employed စင်ကာပူနိုင်ငံသား နှင့် SPR များ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများ CPFထည့်ရန် မလိုပါ။
သင်စုဆောင်းထားသည့် Medisave ပမာဏပေါ်မူတည်ကာ ပြန်လည်ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်ပြခ ၅၀ အပါအ၀င် ဆေးရုံကုန်ကျစရိတ်များအတွက် တစ်နေ့လျှင် ၄၅၀ ထိ ထုတ်ယူသုံးနိုင်၏။ သို့သော် ခွဲစိတ်ကုသမှုများအတွက်မူ မည်သည့်ခွဲစိတ်မှုကို မည်မျှပေးသည်ဟု ပုံသေသတ်မှတ်ထား၏။ ရောဂါအမျိုးအစားအလိုက် ထုတ်ယူခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားရာ အလွန်များပြားရှုပ်ထွေးလှ၏။ ထို့ကြောင့် အသေးစိတ်မဖော်ပြတော့ပါ။ သိလိုသူများhttp://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/schemes_subsidies/medisave/Withdrawal_Limits.html တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရာတွင် ကြီးလေးလှသော ဆေးကုသမှုစရိတ်များကို ကာမိစေရန် အကောင်အထည်ဖော်ထားသော စီမံကိန်းကား MediShield ဖြစ်၏။ ဤသည်မှာ အာမခံပေါ်လစီတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း တစ်ခုကောင်းသည်မှာ ဤအာမခံက သီးသန့်ပိုက်ဆံပေးရန်မလို။ မဖြစ်မနေပေးရမည့်MediSave ထဲမှ ပေး၍ရသည်။ MediShield အတွက် MediSave ထဲမှ တစ်နှစ်လျှင် ၈၀၀ ထိ ပေးလို့ရသည်။ အသက် ၈၁ နှစ်ကျော်သွားလျှင်မူ တစ်နှစ်လျှင် ၁၁၅၀ ထိ ပေးလို့ရပါသည်။
အိမ်ဝယ်ရန် ဘဏ်မှငွေချေးမည့်သူများသည် HBL/1 ပုံစံကိုဖြည့်ပြီး CPF Board သို့ ငွေချေရမည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၃ ပတ်ကြို တင်ရပါမည်။ အိမ်ဝယ်ရန်CPF ပိုက်ဆံဖြင့် သင်ငွေချေမည့်ကိစ္စ အောင်မြင်၊ မအောင်မြင်ကို CPF မှ သင့်ထံ ၂ ပတ် အတွင်း အကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မည်။
၁။ CPFIS အေးဂျင့်ဘဏ်များဖြစ်သောDBS, OCBC, UOB ဘဏ်တစ်ခုခု၌ CPFIS Investment Account ဖွင့်ပါ။ သို့သော် ရွှေထည်ပစ္စည်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမူUOB ဘဏ်တစ်ခုကသာ လုပ်ပေးပါသည်။ Account ဖွင့်ရန် IC Card နှင့် CPF Statement ယူသွားပါ။
၁။ CPFIS-SA အတွက် ဘာ account မှဖွင့်ရန်မလိုပါ။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် ကုမ္ပဏီများသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ သင့် IC Card နှင့် CPF Statementလိုပါလိမ့်မည်။
CPF website မှ သင်၏ my cpf Online Services သို့ သင့်ကိုယ်ပိုင် SingPass ဖြင့် ၀င်ပါ။ ထို့နောက် My Statement တွင် ကြည့်ပါ။ သင့် CPF Accountသုံးခု၌ စုငွေ မည်မျှ ရှိသည်။ မည်ရွေ့မည်မျှ သုံးပြီးသွားပြီ။ မည်ရွေ့မည်မျှ invenstment လုပ်လို့ရမည်။ ပညာရေးအတွက် မည်မျှသုံးနိုင်မည် စသည်တို့ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ အောက်ပါ ကျွန်တော့် My Statement နမူနာကိုကြည့်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ CPF ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအကြောင်းမှာလည်း အလွန်အင်မတန် များပြားလှပါသည်။ ကျွန်တော်ဆက် လျှာမရှည်တော့ပါ။ ငွေစကလေးများ တိုးပွားရန် စိတ်ဝင်စားသူတို့ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော Service/Product Providers များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြပါဟု တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။ ယခုCPF ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအကြောင်း ဤတွင် နားပါမည်။
CPF ပေးသွင်းနေရသူများအနေနှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ သူတို့သားသမီးများအတွက်သော် လည်းကောင်း ပညာရေးအသုံးစရိတ်များကိုCPF ထဲမှ ပေးနိုင်ရန် Education Scheme ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများမှာမူ သူတို့ထုတ်ယူလိုက်သော ငွေပမာဏကို အတိုးနှင့်တကွ ပြန်ဆပ်ရန်လိုပါသည်။ သုံးလို့ရသည်ဆိုတာတောင် ကျောင်းအားလုံး အတွက် ပေးနိုင်တာမဟုတ်။ သူတို့သတ်မှတ်ထားသော ကျောင်းတွင် အချိန်ပြည့်တက်ပါမှ ထုတ်သုံးနိုင်တာ ဖြစ်ပါ၏။
မိဘများအနေနှင့် တစ်ယောက်ထက်ပိုသော သားသမီးကို ကျောင်းစရိတ်ထောက်လိုသည် ဆိုပါစို့။ ပထမဆုံးလျှောက်သော ကလေးကို ဦးစားပေးပါမည်။ accountထဲတွင် ပိုက်ဆံကျန်သေးသည်ဆိုပါမှ နောက်ကလေးအား ထောက်ပံ့ခွင့်ပြုပါမည်။ အကယ်၍ နောက်ကလေးအတွက် CPF ပိုက်ဆံနှင့် မလောက်တော့လျှင် သူ့ကျောင်းစရိတ်လိုငွေကို ငွေသားဖြင့် ထပ်ဖြည့် ပေးရပါမည်။ သင့် account ထဲမှ Available Withdrawal Limit (AWL) ရှိသလောက်ထိ ကလေးများ၏ ကျောင်းစရိတ်ကို ထောက်ပံ့နိုင်ပါသည်။ AWL ကို သင့် My CPF online service မှ My Statement တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Posted by Ko Nge at Monday, September 29, 2014